Cookies ine chokoreti yakasviba, inonaka! | Bezzia
Autumn iri chaizvo nguva yakanaka yekubheka makuki. KuBezzia, hatimbove nungo dzekubatidza ovhoni, asi isu tinonzwisisa kuti munzvimbo idzodzo uko kupisa kuri kumanikidza, zvichanyanya kukuomera. Saka kana usiri kusvika pariri parizvino, chengetedza iyi yekubheka yechero chokoreti macokie ezvekupedzisira.
PaBezzia hatina kukwanisa kuramba. Takadzika kubhizinesi nekukurumidza mushure mekunge shamwari, mushure mekuyedza makuki aya, yakaraira chikafu chavo kwatiri. Iwo ari nyore makukiUyezve, havasi kutya. Iwe unozoda, ehe, yakanaka ruoko yezvigadzirwa kuti uzviite.
Uchave sei nenguva yekutarisa makuki aya ave ne ane rupo kwazvo huwandu hweshuga, saka hazvisi nyore kuzvidya mazuva ese. Asi ivo vakanakisa kutipa chinotapira, chinotapira kwazvo! Ivo vane yekunze yekunze uye inoyevedza cuddly yemukati. Chii chimwe chatinga kumbire? Unosarudza makuki asina shuga? Bvunzo uri muamondi.
1 Zvishongedzo (zvezvikamu makumi maviri)
Zvishongedzo (zvezvikamu makumi maviri)
180 g. yemafuta
170 g. shuga tsvuku
50 g. shuga chena
1 zai + 1 zai yolk
130 g. upfu hwesimba
65 g. hupfu hwegorosi
½ pane mbiriso
½ teaspoon yemunyu
140 g. chokoreti yakasviba
Sungunusa bhotela mugango pamusoro pepakati moto uye toast. Tevere, dururira bhotela mundiro huru uye rega itonhorere.
Apo bhotela iri muchitsimba chemukati, wedzera shuga uye sanganisa netumwe tumiti ruoko kana magetsi.
Ipapo sanganisira zai, zai rezai uye vanilla essence ndokurova zvakare kuti vawane huremu hwakafanana.
Pashure wedzera hupfu hwesimba, hupfu hwegorosi, mbiriso, bicarbonate, munyu uye piniki yenutmeg uye sangana nekumhanyisa mafambiro kudzamara zvanyatsobatanidzwa muhupfu.
Pakupedzisira, cheka chokoreti muzvidimbu nebanga wobva wawedzera.
Shandisa zvipunu zviviri kubata walnut-saizi dumplings iyo iwe yauchasiya mundiro kana tireyi yakazadzwa negirosa risingadzivirire bepa. Wobva waisa ndiro kana tireyi mufiriji kwemaminitsi makumi matatu kuitira kuti mukanyiwa uome.
Zvino, preheat oven kusvika 180ºC uye tumira tireyi yekubheka nemapepa echinyorwa.
Isa mabhora ehupfu pairi, ne zvigunwe zviviri zvakaparadzana pakati pechimwe nechimwe kuitira kuti kana ichiwedzera nekupisa dzisanamatira.
Tora tray kuchoto uye bika pa180ºC kwemaminitsi gumi nemaviri kana kusvika makona ari endarama.
Pakupedzisira, vabvise muchoto uye regai vazorore kwemaminitsi gumi nemashanu usati wavaendesa kune rack kuti vapedze kutonhora.
Nakidzwa nerima chokoreti makuki, wega kana nekofi, mukaka kana chinwiwa chemuriwo.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Bezzia » Recipes » Desserts » Cookies ine chokoreti yakasviba, inonaka!